एउटै टिममा रहन सक्लान् सिटौला र शर्मा? :: राजु अधिकारी :: Setopati
एउटै टिममा रहन सक्लान् सिटौला र शर्मा?
नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा एउटै जिल्लावासी हुन्। कांग्रेसमा प्रभावशाली भूमिकामा रहेका यी दुवै झापाली नेताबीच सधैं छत्तीसको आँकडा रहँदै आएको छ।
गृहजिल्ला झापा कांग्रेसको यसपटकको अधिवेशनदेखि त उनीहरूको प्रतिस्पर्धा झनै बढेको छ। पार्टी चौधौं महाधिवेशनको मुखैमा आइपुग्दा यी दुवै नेता संयोगले एउटै टिममा आइपुगेका छन्।
१३ औं महाधिवेशनदेखि नै शर्मा देउवासँगै छन्। जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको दौरानमा नेता सिटौला सभापति शेरबहादुर देउवा क्याम्पमै पुगेका छन्।
महाधिवेशनको मुखैमा एकैठाउँ भएका यी दुई झापाली नेता एकै टिममा रहन सक्लान्?
कांग्रेसका कतिपय नेता–कार्यकर्ताहरू यसलाई लगभग असम्भव जस्तै मान्छन्। तर, कतिपयले भने शक्ति हात पार्न दुवैले विगत बिर्सेर सहकार्य गर्नसक्ने पनि अनुमान लगाएका छन्।
देउवा समूहमा सिटौलाको औपचारिक 'इन्ट्री' भएपछि शर्मा त्यहाँबाट बाहिरिन सक्ने अनुमान उनका एकथरी कार्यकर्ताको छ।
'हिजो विश्वप्रकाशले कोइराला समूह छाड्नुको एक मात्र कारण सिटौला नै हुन्,' शर्मा निकट कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'सधैं पेलानमा पारेका कारण शर्माले कोइराला समूह छाडेका थिए। अहिले फेरि सिटौला देउवा समूहमै आइपुगेका छन्। यसले एकै ठाउँ रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।'
विश्वप्रकाशकै समूहका अर्काथरी कार्यकर्ता पनि छन्। मुख्य नेतृत्वमा सिटौला नरहेका कारण शर्माले अहिलेको समूहको विकल्प खोज्न हुन्न भन्ने मत उनीहरूको छ।
शर्मा स्वयं भने यसबारे खुलेर बोलिरहेका छैनन्। बरू आफ्नो समूहमा सिटौलालाई स्वागत नै गर्ने उनको भनाइ छ।
'म उहाँ भएको ठाउँमा गएको होइन, उहाँ हाम्रो धारमा आउनुभएको हो,'प्रवक्ता शर्माले सेतोपाटीसँग भने, 'पाँच वर्षसम्म नेतृत्व परिवर्तन भनेर रहेको र अहिले यही समूहमा आएको कुराबारे बहस भिन्दै हो। तर उहाँ हाम्रो समूहमा आइपुग्नुभएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत नै गर्छौं।'
सिटौला र उनका समर्थकहरू भने यसबारे खुल्नै चाहँदैनन्।
'पार्टीमा स्थायी समूह कहिल्यै हुँदैन,' सिटौलासहितको संस्थापन प्यानलबाट प्रदेश १ पदाधिकारीमा उम्मेदवार रहेका एक नेता भन्छन्, 'त्यसैले यो ठूलो विषय होइन। हुनुहुँदैन।'
कांग्रेस राजनीतिमा सिटौला शर्माभन्दा धेरै सिनियर नेता हुन्।
कांग्रेस केन्द्रको विभिन्न भूमिकामा देखिँदा सुरूमा सिटौला र शर्मा दुवै कोइराला प्यानलमा थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी केन्द्रमा सिटौलालाई विश्वास गर्दा विद्यार्थी राजनीतिमा उनले शर्मालाई पत्याएका थिए।
२०५७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सभापतिमा शर्माको दाबी गरेपछि सिटौला उनको विपक्षमा खुलेरै लागे। यद्यपि शर्मा सभापति बने। त्यही बिन्दुदेखि यी दुईबीच असमझदारी चुलिन सुरू भएको थियो।
सिटौला र शर्माबीचको दरारपूर्ण सम्बन्धको उत्कर्ष कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशन थियो। त्यो बेला शर्मा झापा सभापतिमा चुनाव लड्दा सिटौलाले उद्धव थापालाई अघि सारेका थिए। शर्मा पराजित भए।
'त्यो जिल्ला अधिवेशनले उहाँहरूबीच झनै असमझदारी बढायो,' झापा कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, 'त्यो अहिलेसम्म जारी छ।'
यही तिक्तताले यी दुई नेता एकै ठाउँ रहन नसक्ने अनुमान कार्यकर्ताको छ।
पछिल्लो समयमा केन्द्र र जिल्ला दुवैतिर शर्माले शक्ति बढाउँदै लगेपछि सिटौला सशंकित रहेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ। यही आपसी बेमेलले उनीहरूबीच कटुतापूर्ण प्रतिस्पर्धाको अवस्था ल्याएको हो।
सिटौला र शर्मा एउटै समूहमा रहन सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने प्रश्नका पछि अर्को कारण पनि छ- शर्माको उम्मेदवारी घोषणा।
पार्टीको महामन्त्रीमा दाबी पेस गरेका उनलाई सिटौलाले सहयोग गर्लान् भन्ने कुरामा शर्मा पक्षधरहरू विश्वस्त छैनन्। नेविसंघ, झापा सभापति हुँदै संसदीय चुनावसम्मै असहयोग गरेको भन्दै महामन्त्रीमा सघाउने कुरामा शंका रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर महामन्त्री लड्न शक्तिशाली समूहको साथ नभई नहुने बाध्यता शर्माका अगाडि छ।
'जुनै भए पनि बलियो समूहबाटै उम्मेदवारी नदिएसम्म महामन्त्री जित्न गाह्रै हुन्छ,' कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ, 'शर्मालाई यो बाध्यता छ। यसमा सभापतिको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसले यी दुई नेता सँगै रहने–नरहने निर्धारण गर्छ।'
स्रोतका अनुसार देउवा सिटौला र शर्मा दुवैलाई गुमाउन चाहँदैनन्।
सिटौला सधैंका शक्तिशाली नेता भएको र शर्मा अहिलेको कांग्रेसभित्रको सेलेब्रेटी अनुहार भएकाले देउवा दुवैलाई उपयोग गर्ने दाउमा छन्। चर्चित युवा नेताहरू कसैले साथ नदिएका बेला शर्माले देउवालाई साथ दिएका थिए। त्यहीक्रममा देउवाले २०७४ पुसमा प्रवक्ता बनाएर उनलाई 'पुरस्कृत' गरेका थिए।
१३ औं महाधिवेशनका बेला शर्माले सुरूमै देउवा पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए भने सिटौला आफैं सभापतिको दौडमा थिए। पहिलो चरणको मतदानमा तेस्रो भएर अर्को चरणमा पुग्न विफल भएपछि सिटौलाले देउवालाई सघाएका थिए। रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर देउवा सभापति बनेपछि सिटौला केही समय मौन रहे। त्यसपछि भने उनी निरन्तर देउवाको विपक्षमा उभिँदै आए। चौधौं महाधिवेशनका क्रममा सिटौला फेरि देउवा पक्षमै आइपुगे।
जिल्ला र प्रदेश चुनावमा देउवा–सिटौला गठबन्धन बनेको छ। गठबन्धन बनेपछि शर्मा सबभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सिटौलासँगको उनको पुरानो तिक्तता घट्ने होइन निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेका बेला एकै टिममा हुँदा पनि दुईबीच सहकार्य हुन सकेको छैन।
यसको प्रमाण कांग्रेस प्रदेश १ चुनावमा देखिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
'समूहगत रूपमा भन्ने हो भने शर्माले उद्धव थापालाई सघाउनुपर्ने हुन्थ्यो,' अर्का एक नेताले भने, 'तर प्रदेशमा सिटौलाका उम्मेदवारलाई होइन, शर्माको टिमले गुरु घिमिरेलाई सघायो।'
गुरु घिमिरे पौडेल-कोइराला समूहका उम्मेदवार हुन्।
त्यसो त यसपटकको झापा अधिवेशनपछि शर्मा सभापति देउवासँग पनि चिढिएको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ। यसपटक देशभरका जिल्ला अधिवेशनहरू हुँदै गर्दा झापा यस्तो जिल्ला थियो, जहाँ देउवा र पौडेल पक्ष पूर्णतः गायब थियो। मैदानमा सिटौला र शर्मा प्यानल खडा थिए।
शर्माले कुनै बेलाका सिटौलाकै विश्वासपात्र राम कट्टेललाई जिल्ला सभापतिका रूपमा अघि सार्दा सिटौलाले देउमान थेवेलाई अघि सारेका थिए। यी दुईबीचको प्रतिस्पर्धामा सभापति देउवाका विश्वासपात्र मानिने केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकी र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य गोपालकुमार बस्नेतले खुलेर थेवेलाई अर्थात् सिटौला पक्षलाई सघाए।
यति मात्रै होइन, ताप्लेजुङको पाथिभरा यात्राबाट फर्किँदा देउवाकै अर्का विश्वासपात्र डा. प्रकाशशरण महत केही दिन झापा बसेर सिटौला समूहसँग सहकार्यको वातावरण बनाएर काठमाडौं फर्केको शर्मा पक्षधर कार्यकर्ताको आरोप छ।
'काठमाडौंमा देउवा सफल बनाउन शर्मा दिलोज्यान दिएर लाग्ने, देउवाका विश्वासपात्र भने जिल्लामा उनलाई कमजोर पार्न लाग्ने काम भयो,' ती केन्द्रीय सदस्यले भने, 'जिल्लामै असहयोग गर्ने नेताको टिममा लामो समय किन बस्ने भन्ने दबाब उहाँलाई तलबाट निरन्तर आइरहेको छ।'
शर्माले भने आफू 'जहाँ उभिएको हो, त्यहीँ रहेको' प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर देशव्यापी अभियानमा जुटिसकेका शर्मा यी विभिन्न कारणले अहिले असहज अवस्थामा पुगेका छन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १९, २०७८, ०७:५८:००